Royal Caribbean Cruises dia mahatonga ny fanafoanana ho mora sy maimaim-poana
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Royal Caribbean Cruises dia mahatonga ny fanafoanana ho mora sy maimaim-poana
Miaraka amin'ny fanampian'ny COVID-19 tsy fahazoana antoka ny drafitry ny dia manerana izao tontolo izao, nilaza ny Royal Caribbean Group fa hanome fanaraha-maso bebe kokoa amin'ny vahiny ny fanapaha-kevitr'izy ireo amin'ny fialan-tsasatra, ahafahan'ny vahiny manafoana ny fitsangatsanganana raha vao roa andro mialoha ny hiaingany.
Ny politika "Cruise With Confidence" dia ahafahan'ny vahiny ao amin'ny Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara ary Silversea hanafoana hatramin'ny 48 ora alohan'ny sambo. Ny vahiny dia hahazo ny trosa feno amin'ny vidiny, azo ampiasaina amin'ny fitsinjovana ny safidin'ny vahiny amin'ny 2020 na 2021. Mihatra amin'ny famandrihana fitsangantsanganana vaovao sy efa misy io politika io.
"Ny politikantsika teo aloha dia nametraka fe-potoana mialoha ho an'ireo vahiny hanafoana ny sambo fitsangantsanganana, ary nanampy trotraka izany ny adin-tsaina tsy ilaina," hoy izy Richard Fain, ny talen'ny orinasa sy ny CEO. “Manandrana maminavina iray volana na mihoatra mialoha izay mety hanasarotana ireo manam-pahaizana momba ny fitsaboana ny aretina coronavirus, mainka izany fa ny fianakaviana miomana amin'ny fialan-tsasatra.
"Rehefa miovaova be toy ny taloha ny toe-javatra dia tsara ny mahafantatra fa manan-tsafidy ianao hanao fizahana orana," hoy i Fain. “Heverinay fa ny fametrahana fifehezana bebe kokoa eo am-pelatanan'ny vahininay dia manampy azy ireo handray fanapahan-kevitra tsara momba ny fitazonana ny drafi-pialan-tsasatra misy azy ireo na ny fivarotana amin'ny fotoana mety na zotra hafa.”
Ankoatry ny fanalefahana ahiahy ho an'ireo vahiny nasaina dia nilaza i Fain fa ny politika dia hanome fahatokisan-tena bebe kokoa ny mpanjifa amin'ny famandrihana vaovao, fantany fa afaka manitsy ny drafitra ataon'izy ireo izy ireo avy eo nefa tsy misy sazy.
Mihatra amin'ny fitsangantsanganana rehetra amin'ny sambo ny daty na alohan'izay Jolay 31, 2020, ary hatolotry ny marika manerantany an'ny orinasa: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara ary Silversea. Ny antsipiriany feno momba ny politika "Cruise with Confidence" dia azo jerena ao amin'ireo tranokala marika tsirairay.
Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) dia orinasa fitsangatsanganana an-tsambo eran-tany izay mifehy sy miasa marika efatra manerantany: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara ary Silversea Cruises.
Niely tany Afrika ny valin'ny Birao Afrikana momba ny fizahantany momba ny COVID-19
Firenena EU voatanisa lisitra COVID-19: Italia, France, Germany, Spain, Austria
Aza esorina aloha ny saron-tava